ကြှနျတျောသမီးအသကျကို အမစေု ကယျခဲ့တယျ.. – Daily Feed MM
ကြှနျတျောသမီးအသကျကို အမစေု ကယျခဲ့တယျ..
Admin_John | August 14, 2020 | Lifestyle | No Comments
ကွညျနူးပီတိဖွဈရပါသညျကရငျပွညျနယျ၊ ကော့ကရိတျမွို့၊(၂၄.၂.၂၀၂၀)ရကျနေ့၊ ကော့ကရိတျမွို့တှငျ ကငျြးပခဲ့သော နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ အမဒေျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ ဒသေခံပွညျသူလူထုတှဆေုံ့ပှဲ၌ ကြှနျတျောဦးမောငျဝငျးမှကြှနျတျော၏သမီးလေး မစန်ဒာဝငျး(ဒုနှဈ၊ ဘားအံတက်ကသိုလျ) ခံစားနရေသောနှလုံးရောဂါနှငျ့ ငှကွေေးမတတျနိုငျသညျ့အပျေါကုသရာတှငျကူညီပေးနိုငျပါရနျစာရေးသားပေးပို့ တငျပွခဲ့ပါသညျ။
အမစေုမှ စာကို ဖတျရှု့ပွီးကရငျပွညျနယျလူမှုရေးဝနျကွီး ဦးဘိုဘိုဝမေောငျအား ကူညီဆောငျရှကျပေးရနျ တာဝနျလှဲပေးလိုကျပါသညျ။ ဦးဘိုဘိုဝမေောငျမှလညျး အစမှအဆုံး လိုအပျသညျမြားကူညီဆောငျရှကျပေးပါသညျ။ယခုလ ၁၃. ၈ .၂၀၂၀ ရကျနတှေ့ငျ ကြှနျတျော၏ သမီးအား ရနျကုနျဆေးရုံကွီးနှလုံးရောဂါဌာနတှငျ အောငျမွငျစှာခှဲစိတျကုသခဲ့ပွီးဖွဈသညျ။ယခုဓါတျပုံအရ သမီးလေးအောငျမွငျစှာခှဲစိတျပွီး ကနျြးကနျြးမာမာလနျးလနျးဆနျးဆနျး ဖွဈ
နသေညျကိုတှရေ့သညျအတှကျမြားစှာဝမျးမွောကျဝမျးသာဖွဈရပါသညျ။ဦးမောငျဝငျး၊ ကော့ကရိတျမွို့။သမီး အသကျကိုကယျတငျပေးခဲ့တဲ့ အမစေု၊ငှကွေေးမတတျနိုငျသညျ့အပျေါလိုလသေေးမရှိအောငျ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ကရငျပွညျနယျလူမှုရေးဝနျကွီးဦးဘိုဘိုဝမေောငျ၊ရနျကုနျဆေးရုံကွီးနှလုံးရောဂါဌာနမှ ခှဲစိတျအထူးကုဆရာဝနျကွီးနှငျ့ ဆရာဝနျမြား၊သူနာပွုမြားအားလုံးကို အစဉျ ကနျြးမာခမျြးသာစကွေောငျးလကျဆယျဖွာထိပျမှာမိုး၍ သမီး မစန်ဒာဝငျးမှရိုကြိုးရှိခိုး
ကနျတော့ပါတယျ၊အမစေု ကနျြးမာပါစေ၊ အမစေုအောငျမွငျပါစေ၊။
ကြည်နူးပီတိဖြစ်ရပါသည်ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့၊(၂၄.၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ ကော့ကရိတ်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေ့ဆုံပွဲ၌ ကျွန်တော်ဦးမောင်ဝင်းမှကျွန်တော်၏သမီးလေး မစန္ဒာဝင်း(ဒုနှစ်၊ ဘားအံတက္ကသိုလ်) ခံစားနေရသောနှလုံးရောဂါနှင့် ငွေကြေးမတတ်နိုင်သည့်အပေါ်ကုသရာတွင်ကူညီပေးနိုင်ပါရန်စာရေးသားပေးပို့ တင်ပြခဲ့ပါသည်။
အမေစုမှ စာကို ဖတ်ရှု့ပြီးကရင်ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးဘိုဘိုဝေမောင်အား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် တာဝန်လွှဲပေးလိုက်ပါသည်။ ဦးဘိုဘိုဝေမောင်မှလည်း အစမှအဆုံး လိုအပ်သည်များကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ယခုလ ၁၃. ၈ .၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော်၏ သမီးအား ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးနှလုံးရောဂါဌာနတွင် အောင်မြင်စွာခွဲစိတ်ကုသခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ယခုဓါတ်ပုံအရ သမီးလေးအောင်မြင်စွာခွဲစိတ်ပြီး ကျန်းကျန်းမာမာလန်းလန်းဆန်းဆန်း ဖြစ်
နေသည်ကိုတွေ့ရသည်အတွက်များစွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါသည်။ဦးမောင်ဝင်း၊ ကော့ကရိတ်မြို့။သမီး အသက်ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ အမေစု၊ငွေကြေးမတတ်နိုင်သည့်အပေါ်လိုလေသေးမရှိအောင် ကူညီပေးခဲ့တဲ့ ကရင်ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးဘိုဘိုဝေမောင်၊ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးနှလုံးရောဂါဌာနမှ ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့် ဆရာဝန်များ၊သူနာပြုများအားလုံးကို အစဉ် ကျန်းမာချမ်းသာစေကြောင်းလက်ဆယ်ဖြာထိပ်မှာမိုး၍ သမီး မစန္ဒာဝင်းမှရိုကျိုးရှိခိုး
ကန်တော့ပါတယ်၊အမေစု ကျန်းမာပါစေ၊ အမေစုအောင်မြင်ပါစေ၊။
အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ဝင်းကြီးရပ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်၊